जनताले हेर्न नपाउने संविधान दिवसको कार्यक्रम किन ? | Sagarmatha TV
जनताबाटै असुरक्षित महसुस गर्न थालेका हुन भीभीआईपीले ?
काठमाडौं-सरकारले सार्वजनिक रुपमै सभ्य र भव्य रुपमा संविधान दिवसको कार्यक्रम मनाउने घोषणा गर्‍यो ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचनामन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले सार्वजनिक रुपमै भने, ‘हामीले संविधान दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिएका छौं । त्यो संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन र राष्ट्रिय दिवस मनाउन । जुवातास खेल्न, जाँड रक्सी खान तथा डेटिङमा जान हैन् ।’
तर, असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रम हेर्न राष्ट्रिय भावनासहित हातमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर टुँडिखेल पुगेका सर्वसाधारण त्यतिबेला सरकारसँगै आक्रोसित भए जब सुरक्षाकर्मीले सुरक्षाको कारण भन्दै सरकारले आयोजना गरेको संविधान दिवसको कार्यक्रम हेर्न दिएन ।
उत्साहित मन लिएर विभिन्न प्रदर्शन, प्रधानमन्त्रीले देशबासीका नाममा गर्ने सम्बोधन सुन्न पुगेका सर्वसाधारण एकाएक आक्रोशित भए अनि सरकारसँगै प्रश्न गर्न थाले अब सरकारी अधिकारी र जनताबाटै भोट पाएर उच्च पदमा पुगेका अधिकारीहरु जनतासँगै डराउने दिन आएको हो ?
हैन भने हामीले हाम्रै दिवस अर्थात देशको मूल कानून बनेको दिनको सम्झनामा आयोजना गरिएको दिवस र देशले घोषणा गरेको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रम किन हेर्न नपाउने ?
हेर्न पाउने भए कहाँ बसेर हेर्न पाउने । जनताबाट नै असुरक्षित महसुस गर्ने सरकारको सुरक्षा केले गर्छ ? यी आक्रोशित सर्वसाधारणको आवाज हो । जो संविधान दिवसको कार्यक्रम हेर्न टुँडिखेल पुगेका थिए ।
उपचारका लागि तेह्रथुमबाट काठमाडौं आएकी पार्वती कार्की पनि देशले उत्सव मनाउने दिन र सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रम हेर्न टुँडिखेल पुगिन् । मनमा धेरै उत्साह बोकेर देश नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरु सहभागी कार्यक्रम हेर्न गएकी उनलाई टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रम सुरक्षाकर्मीले सुरक्षाकै कारण देखाउँदै हेर्न नदिएपछि सरकारलाई नै गाली गर्दै फर्किन ।
काठमाडौंकै बुढानिलकण्ठकी कमला बोहरा र विराटनगरका गुरु अधिकारले पनि पार्वताकै झै आक्रोश पोखे ।
नेपालीमा राजनीतिक चेतनास्तर माथि उठेको छ । जसले गर्दा सानालाई एैन र ठूलालाई मात्र चैन भन्ने दिन हराउन थालेको छ । अनि उनीहरुले सोधै सोध्ने गरेका छन् । अब देशमा सुशासन कायम हुनुपर्छ । अनि मात्र नेताहरु जनतासँग डराउनु पर्दैन ।
संविधान दिवसको कार्यक्रम हेर्न नपाउने जनताले नेता तथा सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु जनतासँग डराएको भन्नै टिप्पणी पनि गर्न थालेका छन् ।